Dusit International waxay sii wadaa balaadhinta Filibiin iyada oo hudheel cusub oo dusitD2 ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Dusit International waxay sii wadaa balaadhinta Filibiin iyada oo hudheel cusub oo dusitD2 ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • News • Filibiin News • jiga • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dusit International, Shirkadda hoteelka iyo horumarinta guryaha ee Thailand, iyo Torre Lorenzo Development Corporation (TLDC), oo ah mid ka mid ah shirkadaha kobcinta guryaha sida ugu dhakhsaha badan Filibiin, ayaa u dabaaldegay furitaanka hoteelka dusitD2 Davao 6 Sebtember 2019 iyada oo xaflad gaar ah lagu qabtay quruxda weyn ee Dusit Thani Grand Ballroom.
Waxaa marti ku ahaa Mr Lim Boon Kwee, COO, Dusit International, iyo Mr Tomas P. Lorenzo, agaasimaha guud ee TLDC, munaasabadan qaaska ah waxaa ka soo qeyb galay marti sharaf deegaanka ah oo uu ka mid yahay madaxweynaha Philippine Rodrigo Duterte, iyo kuxigeenka Duqa Magaalada Davao Sebastian Duterte, oo ay wehliyaan wakiilo ka socda hogaaminta maxaliga ah. ganacsiyada iyo dalxiiska iyo soo-dhoweynta.
Muujinta sida ay uga go'an tahay Dusit International iyo TLDC inay yeeshaan saameyn maxalli ah oo wanaagsan, intii lagu guda jiray dhacdada TLDC waxay deeq ugu deeqday Ciidamada Qalabka Sida ee Nidaamka Nidaamka Waxtarka Waxbashada ee Filibiin (AFPEBSO), oo caawiya ku tiirsanaanta askarta dhaawaca ah.
Jilicsan ayaa la furay bishii Maarso ee sanadkan, kor u kaca, adeegga buuxa ee dusitD2 Davao waa horumarkii ugu dambeeyay ee TLDC ee gobolka Davao. Naqshadeynta naqshadeeyaha caanka ah ee reer Filibiin Manny Samson, oo ay ku dhiirrigelisay 'firfircoonida nolosha,' hudheelka ayaa si taxaddar leh loogu farsameeyay si loogu muujiyo astaanta gaarka ah ee Dusit ee soo dhoweynta sharafta leh ee Thai ee dhiirrigelinta leh iyadoo sidoo kale la qabsanaysa hodanka dhaqanka meesha loo socdo.
hudheelka dusitD2 Davao waa mid ka mid ah saddex mashruuc oo cusub oo ay shirkadda Dusit International u saxeexday inay maamusho shirkadda TDLC ee ku taal Davao. Sidoo kale waxaa lagu wadaa inay furitaankooda weyn dhowaan qabtaan Dusit Thani Residence Davao, iyo The Club Club oo ku taal Lubi Plantation Island, oo ay maamusho Dusit.
Si jilicsan ayaa loo furay bishan, Dusit Thani Residence Davao waxay ku taal agagaarka hudheelka dusitD2 Davao.
Jilicsan ayaa la furay bishii Diseembar 2018, Dhanka kale, The Club Club oo ku taal Lubi Plantation Island, oo ay maamusho Dusit, waa jasiirad gaar ah oo ka baxsan xeebta Gacanka Davao (kaliya 10 daqiiqo oo doon laga raaco Port Pindasan).
"Waxaan hoos u dhignay oo sharaf noo ahaaday inaan fursad u helno inaan soo dhaweynteenna sharafta leh ee Thai ee Davao iyo inaan la shaqeyno Torre Lorenzo Development Corporation si gacan looga geysto kor u qaadista gobolka adduunka oo dhan," ayuu yiri Mr Lim Boon Kwee, markii uu la hadlayey dhagaystayaasha. xafladii furitaanka. "DusitD2 Davao, Dusit Thani Residence Davao, iyo The Club Club oo ku taal Lubi Plantation Island, oo ay maamusho Dusit si fiican ayey u taagan yihiin si ay ula kulmaan baahida sii kordheysa ee horumarka sare ee gobolka, waxaana rajeyneynaa inaan ka dhigno dhamaantood guul la yaab leh."
Dusit International faylalka ay hadda ka kooban tahay waxay ka kooban tahay 271 guri (sagaal la leeyahay iyo 262 la maareeyay) oo ka hoos shaqeeya lix magac oo ka kala socda 13 dal. Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 50-Dusit huteello sumadaysan oo ku jira dhuumaha iyo
waxay rajeyneysaa inay furto ugu yaraan 10-12 hoteel sanadkiiba meelaha muhiimka ah laga bilaabo sanadka 2020 wixii ka dambeeya.